Ozi kacha ọhụrụ banyere FCT PHDB si Nigeria & ụwa | TAA
Gọọmenti Federal malitere ịmaliteghachi nke 36.5km Wukari-Road ụzọ
Ọtụtụ ndị mmegide na-emegide ndị e jidere na Armenia
Nwoke nọ n'ụlọ ikpe n'ihi ebubo a na-agbali igbu nna
Di m na - ebute m STD - Nwanyi na - agwa ụlọ ikpe
Akwụkwọ OPEC, Mohammed Barkindo, na-ahapụ Donald Trump's tweet, kwuru, sị mmanụ ahịa ...
Pep Guardiola: Manchester City ga-eme mgbanwe iji chebe Premiya Njikọ ...
Man Utd, Spurs na-achọ mmeri FA Cup dị ka ohere ikpeazụ maka ...
Home Tags FCT PHDB
Sen. Emmanuel Bwacha nke na-anọchite anya Taraba South District na Fraịdee mere ka a kwụsị ọrụ okporo ụzọ nke Wukari-Ibi 36.5-kilometer bụ nke a na-atụ anya na ọ ga-emebi N1 ijeri.
Ndị uweojii jidere karịa ndị 180 dị ka ndị na-akwado mmegide na-etinye oche sit-ins ma gbalịa igbochi okporo ụzọ na isi obodo Fraịdea, ihe kachasị ọhụrụ n'oge ngagharị iwe na ihe ha na-agbanye ikike ijide n'aka Serzh Sarkisian.
Pep Guardiola: Manchester City aghaghị ime mgbanwe iji chebe aha Njikọ Premier
Pep Guardiola kpughere na enwere ike igosi ndi egwuregwu na ndi oru a n'oge a, dika Manchester City gbaliri ibu uzo mbu n'igosi Njide ndi isi na United States na 2009.
Onye Nleta 33, Mohammed Mohammed, nọ n'ụlọ mkpọrọ site na Ụlọikpe Magna nke Minna, na-ekwu na ọ na-achọ igbu nna ya na Friday.
Otu onye na-edozi isi nke 32, bụ Sherifat Ojelabi, na Fraịdee, gwara ụlọikpe Igando na Lagos na ya kpọtụụrụ ọrịa di na nwunye site na di ya.
Official: Gomiti Ekiti na-etinye N6.4 ijeri na 1.3km n'elu mmiri
Ekiti State Government na Wednesday kwuru na o jirila N6.4 mejue onu ogugu 1.3 kilomita na Ado Ekiti.
Vidio: Enwetara m nọmba kọntaktị mama m dị ka 'Gucci Grace' - Robert Mugabe Jr
Nwa Zimbabwe mbu nwanyi amara Nwa Mugabe jokingly kwuru na o zoputara nnabata nne ya dika "Gucci Grace" - tupu ya achie ochichi ma weghachitere ya mgbe ha nyochaa otu redio mpaghara, Zim Metro.
Akwa Bishop Idahosa ọrụ gọọmenti etiti gọọmentị iji mee ka ndị Naijiria dịrị ndụ
Achịbishọp nke Chọọchị Chineke Mission International, Margaret Benson Idahosa, na Wednesday kpọtụrụ President Muhammadu Buhari ịchọta ngwọta nke oke mpụ na nchebe na mba ahụ.
Tendai Biti: ntuli aka Zimbabwe maka oke uba
Nhoputa ndi ochichi Zimbabwe choputara ime afo a gabu ihe kachasi ike n'ime ogbo na ihe di egwu iji weghachite ochichi onye kwuo uche ya na uba aku na uba n'uwa Afrika nke otu ndi mmadu na-achikota ebe obu na onwe ha na 1980, kwuru na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Tendai Biti.
Onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ: Ndị nchịkwa kwesịrị ịmalite ịda mbà n'obi
Otu ọkà mmụta sayensị nke Abuja, bụ Dr. Stephen Odey, gwara ndị Nigeria ka ha chebara nsogbu ndị ịda mbà n'obi site na inwe mkparịta ụka na-emeghe na isiokwu.
Nne nwunye Niger na-akwado nkwado maka agụmakwụkwọ ụmụaka
Emir Sanusi kwadoro ụkpụrụ otu maka ụlọ akwụkwọ dị n'otu, ndị ọzọ
Federal govt iwu ahịa na 24-hour petrol ọdụ loading
Ọhụrụ a na-enyo enyo na mwakpo anụ ụlọ gburu ndị ikom anọ na Plateau
2019: Agos ga-erite uru karịa President Buhari - onyeisi oche APC
SGF: Aga m eme onwe m ka m nwee ike ịnweta ọrụ